သနပ်ခါးမေ: March 2014
By **~ မြတ်ကြည်~** 12:14 AM Website လမ်းညွှန်
ဘာမှ မပြောခင် ဒီ မေးခွန်းလေးတွေ အရင် ဖြေကြည့်နော်။ ဖြေရင်းနဲ့ ဘောပင်ရယ် စာရွက်လေးရယ် ယူ ပြီးမှတ်ထား။ အဖြေတွေက နောက်ဆုံးမှာပါတယ်။ ခိုးမကြည့်ရးD
1.လမ်းပေါ်မှာ လမ်းလျောက်နေရင်းနဲ့ အမှိုက်ပုံးကိုမတော်တဆ ဝင်တိုက်မိရင်
2.choco donut စားချင်လို့ဝယ်လာတယ်။အိမ်ရောက်လို့စားကြည့်တော့ choco လည်းမပါဘူး။အလွတ်ကြီး
4.ကမ်းစပ်မှာလမ်းလျောက်ရင်းနဲ့အရမ်းလှတဲ့ရှုခင်း တွေ့လို့ပုံ ဆွဲလိုက်တယ်
5.သင် ဥတစ်လုံးရမယ်ဆိုရင်။ဘယ်ဟာလို ချင်လဲ
1. 1မေးခွန်း က သင့်ဘယ်လောက်ပွင့်လင်း လဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ques:
b.ပွင့်လင်းချင်ယောင်ဆောင်တယ် အမှန်တော့ သိပ်မပွင့်လင်းဘူး
d.ideas ကောင်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းတတ်တယ်
c.ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်ချင်ဘူး/ မြွေကိုသတ်ဖို့ တွေးခဲ့တယ်ဆိုရင် အရင်ကချစ်သူ ရှိပြီးအသဲကွဲဖူးတယ်
b.သတိတော့ရသေးတယ်။နောက်တစ်ယောက် ရှိရင်လဲသူ့လို ပုံမျိုးလေးပဲ
ရာသီဥတုက ကိုယ့် ဘက်မှာ နေလေး လည်း သာ နေသာထိုင်သာရှိထှာ။ ဒီနေ့ feeling အကောင်းမြင်း) အလုပ်နားတုန်းလေး personality quiz လေးတွေ ဖြေကြည့်နေတာ။
ဒီလိုေ​မးခွန်းေ​လးေ​တွေ​ဖြရတာ ဝါသနာပါရင်​ဒီေ​ပေ့ဂ်ျေ​လးမှာေ​ပျာ်​စရာေ​ကောင်းတဲံ့ မေးခွန်း​လေးေ​တွေအများကြီးရှိပါတယ်​http://www.facebook.com/pages/သင်ဟာ-ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ/403429829800896
ကိုယ်​တိုင်​လည်း​ဖြေ၊ သူငယ်​ချင်း​တွေကိုလည်း ​မေးလို့ရတာ​ပေါ့။ :)
သာယာ​ပျော်​ရွှင်​ဖွယ်​ ​နေ့​လေးတစ်​ရက်​ ဖြစ်​ပါ​စေရှင်​ <3
By **~ မြတ်ကြည်~** 10:01 PM DIY, ဖက်ရှင်
အခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ fashion accessories ဖန်စီ လေးတွေထဲမှာ ဒါလေးလဲပါတယ်။ ဘယ်အင်္ကျီနဲ့မဆို ဖြုတ်လို့တပ်လို့လည်း အဆင် ပြေတယ်။ အပြင်မှာ ဝယ်ရင် ၈ ထောင် / ၁သောင်း ပေးရတာ။ ဘာလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မလုပ်တတ်ရမှာလဲ နော။ အဲဒါနဲ့ စမ်းသပ်လိုက်တာ။ :)
မြတ်ကြည်သုံးထားတာ ကတီပါစလေးပါ။ (တစ်ကိုက် ၁၈၀၀ အခု ၂၀ လောက်ထွက်တယ်)
အပေါ်မှာ ခဲ လေးနဲ့ ကော်လာ တစ်ခြမ်းပုံလေး ရာပြီး မရွေ့အောင် ပင်အပ်လေးတွေနဲ့ ထိန်းထားလိုက်တယ်။
အရာ အတိုင်း ညှပ်ပြီး ဖြန့်လိုက်ရင် ဒီ ပုံစံလေး ရပြီ။
အပေါ်မှာ ဘော်ကြယ်လေးတွေ၊ပုတီးလေးတွေ စိတ်ကူးရှိသလို ကပ်ပါတယ်။
Fashion အမြင်မရှိတော့ သိပ်မလှဘူး။
ကပ်ပြီးရင် အလေး တစ်ခုခုနဲ့ အပေါ်က ဖိထားပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
ပြီးရင် ဖဲကြိုးလေးနဲ့ ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ် ကပ်။ နည်းနည်းပို ခိုင်စေချင်ရင်အပ်ချည်နဲ့ တုပ်ပေးပါနော်။
ဒါက မြတ်ကြည်သုံးတဲ့ အဝတ်ကပ်တဲ့ ကော်ပါ။ No stitch၊ သူ့ သုံးရင် အပ်ချုပ်လိုက် စရာမလိုတော့ လူသက်သာတယ်။ :)
ခုထိတော့ အခြေအနေ ကောင်းတုန်းပဲ။ :D
ချုပ်စရာမလိုတော့ ကရိကထလည်း သက်သာတယ်။ စစမြင်ဖူးခြင်းတုန်းကတော့ သိပ်သဘောမကျမိဘူး။ သရေခံလိုလို ဘာလိုလိုဆိုတော့။ :D တကယ်ဝတ်တော့ လှလည်းလှတယ်.. ရိုးရိုး အင်္ကျီလေးတွေကို ဒါလေးနဲ့ အလှဆင်လို့ လည်းရတယ်။ နောက်တစ်ခု မြတ်ကြည် သဘောကျတဲ့ ပုံစံလေးက ရှပ်အင်္ကျီကို ကြယ်သီးအပြည့်တပ်ပြီး ဒါလေးတွေနဲ့တွဲ ဝတ်တာ။
ကိုယ်တိုင် မလုပ်ဖြစ်ဘူး ဆိုရင်တောင် မိန်းကလေးတွေ အတွက် အဝတ်ဗီရို ထဲမယ် တစ်ခုလောက် ထားကြည့်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါ။ :)
Please visit my page http://www.facebook.com/thanakharmay for regular updates. <3